Mahjong. 🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-Emulator. Online
Mahjong. IMahJong ngumdlalo wobukrelekrele ofuna ingqwalaselo enkulu, ubulumko nengqiqo. Funda ukudlala uMah Jong, wenze indibaniselwano ebalaseleyo kwaye ube yimpumelelo enkulu.
Mahjong: Idlalwa njani inyathelo ngenyathelo 🙂
Ukudlala Mahjong online simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
2 nyathelo. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ungaqala ukudlala iziqwenga ezifanayo ukubasusa.
Inyathelo le-3. Nanga amanye amaqhosha aluncedo. Ngaba "Yongeza okanye susa isandi", Cofa iqhosha"umdlalo"kwaye uqale ukudlala, unga"Nqumama"uyiyeke, buza"nceda"okanye"Qalisa kwakhonaNanini na.
Inyathelo le-4. Susa zonke izibini de umdlalo uphele, Hlala ukhumbula imigaqo yomdlalo. Ekugqibeleni, uya kuba nakho ukubhalisa igama lakho kwaye Yabelana ngayo kwiinethiwekhi zentlalo wakugqiba umdlalo.
Inyathelo le-5. Emva kokugqiba umdlalo, cofa "Imidlalo" ukudlala kwezinye iimephu.
Jonga kwakhona i- Imigaqo esemthethweni yeMahjong ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- ummiselo osemthethweni wamazwe aphesheya yalo mdlalo uthandwayo.
UMah Jong ngujUmdlalo wemvelaphi yaseTshayina odlalwa ngabadlali aba-4 kwaye ungomnye wemidlalo eyonwabisayo nexabisekileyo namhlanje. Ngumdlalo wokubala, ubuchule kunye nesicwangciso kwaye umdlalo wayo ufana kakhulu nalowo yenze.
Umdlalo unayo Iziqwenga ezili-144 kwaye ezi zinonobumba abathile beTshayina kunye neesimboli, ezivumela ukufezekiswa kwendibaniselwano ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, kukho izinto ezithile zommandla ezisebenzisa inani elahlukileyo lamalungu.
Eyona njongo iphambili yomdlalo kukuba ngowokuqala ukwenza isandla esivumelekileyo esihlangabezana neyona mfuno iphantsi yamanqaku. Ixabiso lesandla liyahluka kwaye lichazwa bubunzima bendibaniselwano eziyenzileyo.
Imbali yomdlalo we-mahjong sisihloko esiphikisayo esishushu phakathi kweengcali. Abanye bacinga ukuba ikho ngaphezulu kweminyaka engama-2500 kwaye abanye bathi lisusela kwinkulungwane ye-XNUMX okanye ye-XNUMX. Ngaphambi kwenkulungwane ye-XNUMX, nangona kunjalo, akukho ngxelo zembali.
Ngokwentsomi yaseTshayina, isithandi sobulumko saseTshayina Confucius Wayebandakanyeka ekuyilweni komdlalo webhodi. Nangona kunjalo, abukho ubungqina benzululwazi koku. Le yintsomi nje okanye intsomi ngalo mxholo ulandelayo:
Umfazi omhle owayenesizungu wayehlala kwinkundla kaKumkani uWu. Ndiphantse ndadikwa kukufa. Ngenye imini waqala ukukrola imifanekiso yoqalo kunye neendlovu ezazifana namatye e-domino. Ukugqiba kwakhe wazisa izicakakazi zakhe waqalisa ukudlala ngazo. UConfucius kuthiwa uphuhlise lo mdlalo ngakumbi.
Ukuguqulelwa ukusuka kwi-Chinese kuthetha "Mahjong" ngokunjalo ne "ungqatyana othethayo"kwaye, ngokwentsomi, umdlalo webhodi ufumene eli gama ngenxa yokuba UConfucius wayezithanda zonke iintlobo zeentaka. Hi ndlela leyi, kuphela amanene bavunyelwe ukuba badlale umdlalo. Ukuba abantu abaqhelekileyo bayayidlala, babephula umthetho.
Izazi ngembali, kwelinye icala, zikholelwa ukuba umdlalo we-mahjong ivela kwimidlalo yamakhadi amandulo yaseTshayina eyayibhalwe e-China ngenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX. Balandelela imvelaphi yomdlalo kwiindawo ze IShanghai, iAnhwei kunye neKiangsu, njengobungqina bemidlalo yamakhadi enjalo yafunyanwa apha.
Iziqwenga zomdlalo weMahjong 🀄🀩
Iseti eqhelekileyo iqulathe 136 okanye iziqwenga ezili-144. Iiseti zeMahjong zahlulwe zaziindidi ezahlukeneyo:
Zilungiselele iziqwenga "Isangqa"
Zilungiselele iziqwenga "uqalo".
Zilungiselele iziqwenga "Umntu".
Amacandelo amaDragons amathathu.
Iziqwenga zamaxesha onyaka.
Mahjong online umdlalo
IMahjong isadlalwa njenge umdlalo webhodi yemveli. Nangona kunjalo, njengoko imidlalo ekwi-Intanethi yathandwa ngakumbi, khange kuthathe xesha lide kwiinguqulelo ezahlukeneyo zeMahjong ukuba zivele kwi-Intanethi.
Namhlanje, umdlalo webhodi kwinguqulelo yawo ye-Intanethi yenye yezona zinto zidumileyo ezithandwayo kwaye, njengomdlalo weflash, ngokubanzi ubonelelwa simahla. Ke yena umdlalo mahjong iyafumaneka njengomdlalo okwi-intanethi kwiintlobo ngeentlobo ezahluka-hlukeneyo ezineempawu ezahlukeneyo. Okwangoku ezona nguqulelo zomdlalo wesintu zibandakanya:
Umnyama nomhlophe 2
Umgaqo osisiseko womdlalo yile Zonke iziqwenga mazicocwe ngababini nangaliphi na ixesha. Into ekufuneka uyenzile kuku cofa isibini esihambelanayo (iimpawu ezifanayo). Nangona kunjalo, amatye anokukhutshwa kuphela ukuba awogutyungelwanga ngamanye amatye.
Kuya kufuneka ushiye simahla kwicala elinye. Kuxhomekeka kwindlela afunyenwe ngayo amatye, ewe kunokwenzeka, akukho zimbini ziyavezwa. Umdlalo uphelile. Umdlalo ulawulwa ngokulula ngempuku.
Uncedo oluthile lomdlalo weMahjong kukuba ayikhuthazi kuphela ukucinga okuqinisekileyo, kodwa ikwakhona Ukukwazi ukugxila nokukhumbula.
Ukwahluka okwahlukileyo kweMahjong
Ngokweengxelo, abarhwebi baseTshayina bazisa umdlalo kumazwe asentshona. Imithetho eyahlukeneyo kunye neendlela zomdlalo zaqanjwa apha. Ivenkile enkulu JP uBabock ebefuna ukwenza lula imigaqo yiyo loo nto epapashe incwadi "Imigaqo yeMah-Jong"Ngenxa yoko, iMahjong yathandwa ngakumbi.
Inguqulelo yaseMelika yeMahjong itshintshiwe ngokuqhubekayo kwaye yahluke kakhulu kwinguqulelo yoqobo. Imigaqo yenkcubeko nganye iye yahlengahlengiswa nakwamanye amazwe afana neJapan okanye iGreat Britain. Inguqulelo yaseHong Kong kunye neCanton yomdlalo idlalwa rhoqo namhlanje.
Iindidi zeMahjong namhlanje🀧
IHong Kong Mhjong okanye iCantonese Mahjong 🀄
Eyona ndlela isetyenzisiweyo yomdlalo yile IHong Kong Mhjong okanye iCantonese Mahjong. Ngokuyilwa kweeholo zongcakazo ezikwi-Intanethi, iJapan yazisa ukungcakaza kwiiholo zayo, ivumela abadlali ukuba qhagamshela nabanye abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Oku kwenza umdlalo uthandwe nangakumbi, kwaye iinguqulelo ezintsha zomdlalo odumileyo zakhutshwa kwakhona.
Okumangalisayo kukuba Inguqulelo yoqobo yaseTshayina yomdlalo ayisadlalwa eChina. Bambalwa kuphela bambalwa abalandeli abathembekileyo eNtshona.
E-China, kunye ne-Hong Kong, ingxelo eguqulweyo yomdlalo ithandwa kakhulu. Abanye Utshintsho emva kweminyaka yoo-1930 lwenze iMahjong yaba ngumdlalo wokungcakaza owaziwayo. Ngokungafaniyo neminye imidlalo yamathuba, Umntu akanakho ukuphumelela umdlalo weMahjong kuba ebenethamsanqa.
Umdlalo ufuna Isicwangciso, isantya kunye nohlalutyo lwabanye abadlali ukuze baphumelele. Oku kuqinisekisa iMahjong imeko ebhetele nengqondo ngakumbi kuneminye imidlalo.
Umahluko neMahjong kukuba ungadlala ngokwakho. Kuya kufuneka ususe zonke iithayile ezifanayo ukuze ube yinkosi yeMahjong. Umsebenzi wakho kukufumana kunye nokususa iziqwenga ezifanayo zokufumana amanqaku. Qala ukusuka phezulu nangaphandle, kwaye usebenze kwiziko. Qala kwakhona ukuba akukho ntshukumo ifanelekileyo ishiyekileyo!
Imigaqo esemthethweni yeMahjong
Ukudlala iMah Jong ngokuchanekileyo, kufuneka uqonde kwaye ungene ngaphakathi kwiingqondo eziphambili. Nayi imigaqo esemthethweni yeMahjong. Lonke ulwazi oluqulethwe kweli nqaku lukhutshwe kwimigaqo ye-Mahjong yamanye amazwe.
Siyathemba ukuba ungayisebenzisa ngokupheleleyo. 🙂
Yintoni ekufuneka uyenzile ukuqala ukudlala iMahjong?
Amatye ayi-144 okanye ali-136 eMahjong
UMah Jong, ngumdlalo owenziwe Icandelo le-144. Kuzo zonke kukho abalinganiswa baseTshayina kunye neesimboli ezivumela ukufezekiswa kwendibaniselwano ezahlukeneyo. Iziqwenga ezenza umdlalo we-Mah Jong zezi zilandelayo:
Iithayile eziqhelekileyo zibaliwe ukusuka kwi-1 ukuya kwi-9, zize ke zihlelwe zibe ziisuti ezintathu:
Isangqa okanye iibhola
Kwikhadi ngalinye kukho ezine ezifanayo (Oko kukuthi, siya kuba nawo, umzekelo, amakhadi amane aBathathu abalinganiswa). Iithokheni eziqhelekileyo zikwabizwa ngamanye amagama:
Kwiitshipsi Uno y Thoba (1 no-9) kwisuti nganye ikwabizwa ngokuba "Iitheminali".
Kwiichip phakathi kwe Ezimbini kunye E sibhozo (2-8) yesuti nganye yaziwa ngokuba yi "Elula".
Singafumana iintlobo ezimbini zeetshiphusi ezikhethekileyo:
Iintyatyambo kunye neethokheni zamaxesha
Ezi thayile zibizwa njengezizodwa kuba bafumana amanqaku ngokwahlukileyo kunesiqhelo.
Iitshipsi ze-Honours zezona chips zibaluleke kakhulu kumdlalo, ayisiyiyo kuphela yokuba zixabise amanqaku, kodwa ngamanye amaxesha ziphindaphinda ixabiso lamanqaku onke esandleni.
Iintyatyambo kunye neethokheni zesikhululo kufuneka ziboniswe kwakamsinya nje emva kokuba ushiye, kwaye zisetyenziselwa kuphela ukufumana amanqaku, kwaye zithathe omnye umqondiso kwakhona. Abathambekele ekuchaphazeleni umdlalo ngokwawo kakhulu, yiyo loo nto bekwabizwa ngokuba "ziibhonasi zebhanti".
Kukho imithetho emininzi yeMahjong engayithathi ngqalelo intyatyambo kunye neethayile zonyaka, ezisusa kumdlalo.
Phakathi kweethokheni zeembeko sinokukwazi ukwahlula iintlobo ezimbini:
Iidragones: bomvu, luhlaza namhlophe.
Imimoya: ukusuka eMpuma, eMzantsi, eNtshona naseMantla.
Njengakwithokheni yesiqhelo, ithokheni nganye yophinda-phindo iphindwe kane (ke kukho amathokheni ama-4 oMoya oMzantsi, umzekelo).
Okokugqibela, sineentyatyambo zeentyatyambo kunye nexesha, ezongeza ukuya kwiithayile ezisibhozo:
zine flores: zihlala zinemifanekiso eluhlaza okwesibhakabhaka okanye emnyama, kwaye zibhalwe ngombala obomvu.
zine amaxesha onyaka: phantse bahlala benemifanekiso ebomvu, kwaye babalwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye omnyama.
Iintyatyambo namaxesha onyaka zihambelana ngqo nemimoya, kwaye zisetyenziselwa ukukora njengeethokheni zebhonasi ngokunxulumene nomoya ngamnye:
La intyatyambo 1 kunye Isikhululo 1, zihambelana nomoya Este.
Intyatyambo 2 kunye Isikhululo 2, kunye nomoya on.
Xa sithetha ngentyatyambo intyatyambo 3 kunye Isikhululo 3, kunye nomoya Oeste.
La intyatyambo 4 kunye Isikhululo 4, kunye nomoya mantla.
Injongo yomdlalo fumana amanqaku amaninzi kangangoko ukufunyanwa "ngokwenza iMahjong".
Ukwenza i-Mahjong kwi-RCM kufuneka ubenayo Amanqaku e-8 ubuncinci (kungabandakanyi iindawo zeentyatyambo / zonyaka), ke kuya kufuneka uyazi intshukumo kakuhle.
Umdlalo opheleleyo weMahjong uqukethe izandla ezili-16 okanye imidlalo, yahlulwe ngeerandi: Iijikelezo ezi-4 zemidlalo emi-4 inye.
Nangona umdlalo opheleleyo unezandla ezili-16 okanye imidlalo, kwiitonamenti ezininzi udlalwa ngexesha. Ngokwesiqhelo, imidlalo nokuba yimizuzu engama-90 okanye iiyure ezi-2.
Umjikelo ngamnye unxulunyaniswa nomoya, osetyenziselwa ukumisela amanqaku ekupheleni komdlalo ngamnye, kwaye ubizelwe ntoni Umoya oxhaphakileyo:
Umjikelo 1: Umoya wasempuma
Umjikelo we-2: Umoya wasezantsi
Umjikelo 3: Umoya wasentshona
Umjikelo 4: Umoya oMntla
Imimoya yomjikelo ngamnye ayichaphazeli umdlalo ngqo, kuphela amanqaku. Ekupheleni komjikelo ngamnye, a utshintsho lwezihlalo.
Ukuhanjiswa kwemimoya kwenziwa kube kanye, kwaye ngokungacwangciswanga, ekuqaleni komdlalo.
Umoya ngamnye unikwa indawo emiselweyo. IMpuma kufuneka ibe noMzantsi ngasekunene, uMntla ngasekhohlo kunye neNtshona kwelinye icala.
Qaphela ukuba ayivumelani neempawu ezibalaseleyo!
Kuxhomekeke kumoya omchukumisileyo, umdlali ngamnye kufuneka ahlale ngokwale ndawo akuyo. Ukuhanjiswa kwemimoya kunokwenziwa ngeendlela ezininzi, kodwa ezona zilula zezi:
Umdlali ngamnye uphosa idayisi kwaye wabela amanani ngemimoya (1 = EMpuma, 2 = EMazantsi, 3 = ENtshona, 4 = Emantla nase5,6 = Qengqa kwakhona).
Ukubeka isiqwenga somoya ngamnye ujonge phantsi, kwaye umdlali ngamnye ukhetha isiqwenga.
Phambi komdlalo ngamnye
Udonga luqulathe Iibhloko ezi-18 de Iithokheni ezi-2 ukuphakama, ukwenza isikwere, kwaye kufuneka kwakhiwe ekuqaleni kwesandla ngasinye kumdlalo.
Umdlali ngamnye kufuneka enze indawo yakhe eludongeni ngokudibanisa iithayile ezili-18 ubude neetayile ezi-2 ukuphakama, zonke zijongise ezantsi.
Nje ukuba umdlali ngamnye akhe icala labo eludongeni umphumo kufuneka ube sisikwere seebhloko ezili-18 x ngeebhloko ezili-18.
Ngaphambi kokuhambisa amathokheni, kuya kufuneka sibone ukuba leliphi icala lodonga esiza kuqala ngalo ukuhambisa.
Ukwenza oku, umdlali Este izokwazisa Iidayisi ezimbini, Eziza kubonisa icala lodonga apho ukuhanjiswa kweetshipsi kuya kuqala khona.
Ukufumanisa icandelo lodonga apho ulwabiwo luqala khona, kubalwa ukuqala eMpuma kwaye kulandelwe ulandelelwano lomdlalo (ngokuchasene newotshi). Ke ngoko, uya kuqala ngenxalenye esempuma yodonga ukuba uqengqa u-5 okanye u-9 ngedayisi, ngenxalenye esemazantsi ukuba uqengqa u-2, 6 okanye u-10, njalo njalo.
Kumzekelo wethu, umdlali waseMpuma uqengqe u-6 no-5, ebonisa ukuba udonga luya kuvulwa kwicala lomdlali waseNtshona (6 + 5 = 11).
Isivumelwano se Chip
Umdlali ophambi kwesiqwenga sodonga apho ikhefu liza kwenziwa khona ulawula ukudubula abanye Iidayisi ezi-2 eya kuthi ibonise ibhloko yeethayile oza kuthi luvuleke eludongeni (Oko kukuthi, ibhloko ekuza kuthathwa kuyo iithayile). Kumzekelo wethu ngumdlali waseNtshona.
Ukuhanjiswa kweetshipsi kwenziwa ngumdlali ngamnye othatha ibhloko yakhe yeetshipsi.
Ibhloko yokuqala iya kuba lilandelayo kwinani elipheleleyo leedayisi ezine eziqengqelweyo (iidayisi ezi-2 zokwazi icala lodonga apho usasazo luqala khona kunye nezinye iidayisi ezi-2 ukwazi ibhloko).
Iqala Bala ukusuka ekunene ukuya ekhohlo kwicala lodonga eliboniswe ngamadayisi amabini okuqala (ngokwembono yomdlali okwinxalenye yodonga evula ngalo. Kwimeko yethu, umdlali waseNtshona). Uthatha ibhloko elandelayo Yongeza idayisi ezi-4 kwibloko.
Qaphela: Qaphela ukuba kungenzeka ukuba isixa sedayisi esi-4 sikhulu kune-18 (bububanzi becala lodonga). Kwimeko apho, ibhloko yokuqala kwicala elilandelayo lodonga iyaqhubeka ukubalwa kude kufikelelwe kwisixa sedayisi.
Kumzekelo wethu, iNtshona iphose enye iidayisi ezi-2 zaza zaqengqeleka ezi-4 zaze zayi-5. Oko kukuthi, uya kuqala ukuthatha iithayile eludongeni ukusuka kwibloko esecaleni kwenombolo ye-20, ukubala ukusuka ekunene ukuya ekhohlo (ukusuka kumbono womdlali waseNtshona) ukusuka kwibhloko yokuqala kwicala lomdlali waseNtshona.
Ithayile ngaphambi kokuqala kwetayile yokuhambisa iya kuba yitayile yokugqibela eludongeni.
Kumzekelo wethu, ithayile yokugqibela eludongeni yithayile ephezulu yebhlok engu-20 (ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka), kwaye ibhloko apho kuthathwa khona iithayile ibhloko ebomvu.
Kwi-RCM akukho udonga olufileyo.
Umdlali waseMpuma uya kuthatha iibhloko ezimbini zokuqala (kwiithokheni ezi-4 zizonke).
Ibhloko enethokheni yokugqibela ihlala ijika (kodwa ayifuneki) ukubonisa ngokucacileyo ukuba icala lelo donga kukuphela. Le bhloko inokujikwa nangowuphi na umdlali (uhlala edlala phambi kwale bhloko okanye umdlali waseMpuma ngokwakhe).
Ke umdlali wase Mzantsi uya kuthatha iibhloko ezimbini ezilandelayo.
Ke umdlali waseNtshona wayeza kuthatha ezimbini ezilandelayo.
Ke umdlali waseNyakatho iibhloko ezimbini ezilandelayo.
Emva kwexesha, umdlali waseMpuma uya kunikwa ezinye iibhloko ezimbini.
Kwaye njalo ke de umdlali ngamnye athathe iibhloko zabo ezintathu zeethayile ezi-4 (Oko kukuthi, ngelo xesha umdlali ngamnye kufuneka abe neethayile ezili-12 xa zizonke).
Okokugqibela, umdlali waseMpuma uya kuthatha iithayile ezi-2 (iithayile eziphezulu zeebhloko eziphawulwe ngombala obomvu).
Kwaye emva koko abadlali base Mzantsi, Ntshona kunye noMntla baya kuthatha ithokheni enye nganye.
Ekupheleni kwesivumelwano, umdlali ngamnye uya kuba neetshipsi ezili-13, ngaphandle kweMpuma, eya kuba ne-14. Umdlali onguMpuma uya kubeka idayisi ngasekunene kwakhe ukubonisa ukuba ungowaseMpuma.
Imithetho yaseTshayina yakudala i-Dead Wall Token Deal
El Ibhloko apho uqala khona ukuthatha iichips Ibhloko ibekwe kwindawo ebonisa isibalo se Iidayisi ezintathu ziqengqiwe ngaphambili.
Se Bala ukusuka ekunene ukuya ekhohlo ukusuka kwindawo yokujonga umntu okwelo cala lodonga.
Kumzekelo wethu, ibhloko yokuqala ibhloko ye-12 kwicala laseNtla kodonga lomdlali. Ngamanye amagama, uya kuqala ukuthatha iithayile eludongeni ukusuka kwibloko eyi-12, ibhloko ebomvu kulo mzobo.
Nje ukuba wazi apho uza kuqala khona ukuthatha iithayile, kukho iqela leethayile ezingenakusetyenziselwa ukweba iithayile eziqhelekileyo kumdlalo wonke. Ezi thokheni zibizwa udonga olufileyo, kwaye banjalo Iithokheni ezi-14 (Oko kukuthi, iibhloko ezi-7) ezisebenza kuphela ukuthatha iichips ezingaphezulu.
Njalo kufuneka uhlale Iimpawu ezi-14 zodonga olufileyo. Ke ngoko, udonga olufileyo luya kushukuma njengoko iithayile ezizezinye zithatyathwa kulo. Ukuba udonga olufileyo lufikelelwe ngaphandle kokuba umdlalo ugqityiwe, iya kuqwalaselwa ngaphezulu ngaphandle kokuphumelela komntu (le meko ibizwa njalo null isandla).
Kumzekelo wethu, ziithayile ezili-14 (iibhloko ezisi-7) ngasekunene kwithayile yasekhaya. Zibhlokhi eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Nje ukuba ibhloko yokuqala isekwe, isivumelwano se-chip siqala. Umdlali ngamnye uthatha iibhloko zebhokisi njengoko kuchaziwe apha ngasentla *.
Ngaphambi kokuqala, kufuneka sikhumbule ukuba kukho indibaniselwano esisiseko e-3 okanye ukuhamba eMahjong, kodwa ukuze sikwazi ukuyenza, eminye imigaqo kufuneka ilandelwe:
Yiyo I-3-tile ngqo zilandelelana ze isuti efanayo (Ojo, Iichips ezi-3 ngokuchanekileyo, akukho zinyuko zeetshipsi ezi-2 okanye ezi-4).
ngokulahla komdlali ngasekhohlo
okanye ngethokheni ethathwe eludongeni.
Ngaphandle: Ukuba ufuna ukwenza i-Chi kuphela ukufumana iMahjong, ungayenza ngethayile elahliweyo ngawo nawuphi na umdlali (ayifuni ukuba ibe ngasekhohlo).
IPung / iPung / iPung
Yindibaniselwano ye Iithayile ezi-3 ezifanayo.
Inokwenziwa ngokulahla nawuphi na umdlali.
Yindibaniselwano ye Iithayile ezi-4 ezifanayo.
Ukuba utyhile i IPung kwaye uzobe eludongeni ithokheni elingana naleyo yePung, ungayandisa iPung kwaye wenze i-Kong. (Ojo, ngekhe wenze i-Kong ngale ndlela ngomnye umdlali olahlekileyo. Nje ukuba iPung ivezwe, inokwandiswa kuphela iye kwiKong ngomqondiso owufumanayo)
Ukuba uneetayile ezi-4 ezifanayo esandleni sakho, ukuze zibalwe njenge-Kong kufuneka uyibonise. Kuya kufuneka ubeke iziqwenga ezi-4 ujonge phantsi (ezifihliweyo, ngaphandle kokwazi ukuba yintoni) kwaye uyixele njengeKong. Le Kong, apho iithokheni ezi-4 zazibanjwe ngesandla kwaye amathokheni ayaculwa kodwa angaboniswa, ayabizwa Kong efihliweyo.
Umdlalo uqhubeka ngokujika, kwaye uhlala usenzeka kwicala elinye: ngokuchasene newotshi. Landela ulandelelwano: East-South-West-North-East -..., njalo njalo.
Olu luvo lomdlalo luhlala lulandelwa, ngaphandle kwaxa umdlali ongazukujika efuna ithayile ilahlwe ngomnye umdlali ukwenza iPung, iKong okanye iMahjong.
Kwimeko apho, i-odolo yaphulwe kwaye umdlalo uya kuqhubeka kulo mdlali, kodwa ke uya kuqhubeka kwakhona ngengqondo yokuba sibonisile kuloo mdlali.
Umzekelo, umdlali waseMpuma uphosa ithokheni efunwa ngumdlali waseNtshona. Kwimeko enjalo, ingqondo yaphukile (kuba kufanele ukuba ibe lixesha lomdlali waseMzantsi), kwaye umdlalo uya kulandelwa ngumdlali waseNtshona, oya kuthi emva kokuba ethathe ithayile elahliweyo, aphose enye yeethayile zakhe, kwaye umdlalo uya kuqhubeka kumdlali waseMantla .
Emva kokuhanjiswa kweetshipsi
Nje ukuba iithokheni zisasazwe, kufuneka kuboniswe iithokheni zeentyatyambo kunye nezikhululo zomdlali ngamnye, kunye neKong enokwenzeka (ngokulandela iodolo).
Iintyatyambo namaxesha aboniswa kuqala, emva koko yiKong.
Ukuqala ngomdlali waseMpuma kunye nokuhamba kwicala lomdlalo (eMpuma-Mzantsi-Ntshona-Ntshona-Ntshona), abadlali babhengeza iiNtyatyambo zeNtyatyambo kunye neeXesha abanazo, bebeka ubuso babo phambi kwabo nasekunene.
NgeToken nganye yamaTywina kunye namaXesha amaXesha ebonisiweyo, umdlali ngamnye uthatha ithokheni entsha eludongeni.
Iimpawu ezongezelelekileyo ezithathwa eludongeni zeentyatyambo / amaxesha onyaka okanye iKong ziyabizwa ukutshintshwa okanye ukuxhaswa kwee-chips. Iichips zokubuyisela zithathwa ecaleni ukuphela kodonga. Kumzekelo wethu, ngenxa yebhloko yombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukuba nayiphi na iithayile ezintsha ibizezinye iintyatyambo zeentyatyambo kunye neeXesha, iyakuboniswa kwaye kuya kuthathwa enye iithayile ukusuka esiphelweni sodonga, njalo njalo.
Akukho sibophelelo ukungabonisi ngokukhawuleza iithayile zentyatyambo / zonyaka okanye iKong. Banokuboniswa nangaliphi na ixesha ngexesha lomdlalo ukuba umdlalo awukapheli.
Umdlalo uqala ngokulahla ithayile ngumdlali waseMpuma (khumbula ukuba iMpuma iqala ngeethayile ezili-14, ngelixa abanye abadlali beqala nge-13).
Umdlalo uphuhliswa uhlala ulandela umxholo ochaziweyo, kwaye wophuke kuphela xa umdlali ongenalo ithuba efuna ithayile elahliweyo yokwenza iPung, iKong okanye iMahjong. Ke iya kuphinda iqhubeke kwakhona ngalo mdlali, ilandele imeko efanayo yomdlalo.
Umdlalo uphela xa umdlali esenza iMahjong okanye iithayile zodonga ziphelile.
Ngalo lonke ixesha umdlali elahla itayile, kufuneka ayibeke ajonge phezulu phambi kwendawo yabo (kwaye iya kuhlala injalo kuwo wonke umdlalo), kwimiqolo eyalelweyo yeethayile ezi-6 (umqolo wokuqala kumbindi wetafile kunye nokulandelayo ngakumbi nangakumbi kufutshane).
Akukho mqondiso ubizwayo. Yindibaniselwano kuphela eyenziweyo ngamaqhekeza alahliweyo ngabanye abadlali, iintyatyambo / izitishi okanye ukwenza iMahjong (ebonisa ngokucacileyo iChi, iPung, iKong, iNtyatyambo okanye iMahjong / Hu) kuthiwa ngokuvakalayo.
Ukuba umdlali unqwenela ukuthatha ithokheni (kwaye angayithatha) kuya kufuneka ayitsho ngokukhawuleza xa ilahliwe, nokuba ayililo ithuba lakhe.
Ithayile elahliweyo inokuthathwa ukwenza indibaniselwano nje, ekufuneka ibonakalisiwe ijongane nabanye abadlali.
Ingqwalaselo! Awungekhe uthabathe ithayile elahliweyo ngokufumba, ngaphandle kokwenza umdlalo.
Nje ukuba ithayile elahliweyo ingathathwa nangubani na, ayinakusetyenziselwa umdlalo uphela (Oko kukuthi, ukuba kamva sinomdla kwitayile ezilahliweyo ngaphambili, asizukukwazi ukuyithatha).
Emva kokulahla ngakunye
Emva kokulahla umqondiso, izinto ezi-3 zinokwenzeka:
Umdlali ufuna ukuba ithayile elahliweyo igcwalise iPung okanye iKong okanye yenze iMahjong.
Kuya kufuneka uyitsho ngokukhawuleza xa ulahliwe, nokuba ayililo ithuba lakho.
Kuya kufuneka ubhentsise umdlalo ngendlela eza kubonwa ngabo bonke abanye abadlali ngexesha lomdlalo uphela.
Ngoku ucwangco lomdlalo luya kuqhubeka kulo mdlali, ekufuneka ephose uphawu.
¡OjoUmdlali otsala iithayile ezilahliweyo akanako ukuthatha ithayile eludongeni! (Ngaphandle kokwenza kweKong)
Ukuba wenza iMahjong, uyakushiya itayile avale ngayo elele phantsi esenza indibaniselwano aphumelele kuyo:
Umdlali ngasekunene kwelahli ufuna ithokheni yenze i-Chi.
Kuya kufuneka ithi njalo nje ukuba ilahlwe.
Okokugqibela, umdlali kufuneka aphose ithayile (Khumbula, umdlali otsala ithayile elahliweyo ayithathi eludongeni, ngaphandle kokuba iyenza i-Kong).
Akukho mdlali ufuna ithokheni.
Ithayile elahliweyo ayinakusetyenziselwa umdlalo uphela.
Umdlali olandelayo ngokulandelelana komdlalo uya kuthatha ithayile eludongeni kwaye kufuneka alahle enye ithayile.
Umlo wethayile elahliweyo
Ukuba ngaphezulu komdlali omnye ubanga uphawu olufanayo, indlela yokukhetha ukuthatha ithokheni iya kuba yile ilandelayo:
Umdlali ofuna ithokheni ayenze Mahjong (o Hu).
Umdlali ofuna ithokheni ye IPung okanye Kong.
Umdlali ofuna ithokheni yokwenza i chi.
Qaphela: Ukuba abadlali ababini okanye nangaphezulu bafuna ithayile efanayo yokwenza iMahjong, umdlali olithuba lakhe liphumelele ngendlela eqhelekileyo yomdlalo. Mnye kuphela umdlali onokuphumelela.
Ubusela bethayile elahliweyo
Xa umdlali ethatha isiqwenga esilahliweyo ngomnye umntu, kufuneka awise phantsi loo nto ayibileyo, ayibeke ngendlela ebonisa ukuba uyinikwe ngubani.
Umzekelo, ukuba umdlali utsala ithokheni elahliweyo umdlali ngasekhohlo kwakhe (3 kaBamboo okanye 9 weeDiski), kufuneka ushiye indibaniselwano ngokujonga ithokheni etshiweyo ibekwe ngasekhohlo:
Ukuba umdlali utsala ithokheni elahliweyo umdlali ngaphambili (i-9 yeeDiski), kufuneka ubonise ukudityaniswa kwetayile ebiweyo eguqulweyo kwaye ibekwe embindini.
Ukuba umdlali utsala ithokheni elahliweyo umdlali ngasekunene (iidiski eziyi-9), kuya kufuneka ushiye indibaniselwano ujonge ikhawuntari ebiweyo ujike wabekwa ngasekunene.
Emva kokwenza indibaniselwano etsaliweyo kunye nethokheni elahliweyo ngomnye umdlali, olo dibaniso kufuneka lishiyeke kumboniso womdlalo uphela kumdlalo. Inxalenye elungileyo lomdlali oyenzileyo.
Oko kukuthi, zombini iintyatyambo / izikhululo kunye neKong, kunye nokudityaniswa kweethayile ezilahliweyo, kushiywe ngasekunene komdlali ngamnye.
Ukuba iithayile eziseludongeni ziyaphela kwaye akukho mntu uphumeleleyo umdlalo uphelile. Ezi ntlobo zemidlalo zibizwa null isandla.
Kwelinye icala, ukuba umdlali wenza i-Mahjong kufuneka abale onke amanqaku akhe ngokuvakalayo (nditsho namanqaku eentyatyambo), ethatha iithayile zakhe ezilahliweyo ngokudibanisa okanye ithayile efumana amanqaku (kwindawo nganye itayile elahliweyo okanye amanqaku ali-10 ubuso obulahliweyo phantsi).
Okokuqala, amanqaku ngokudlala ngakunye ayongezwa, ukwenza ukuba kucace ukuba ubuncinci bamanqaku ayi-8 afikelelwe. Emva koko amanqaku eentyatyambo ayongezwa.
Oku kwenzelwa ukucacisa ukubalwa kwetafile ngaphandle kokusebenzisa ipensile nephepha kwiiakhawunti.
Umzekelo, ukuba umdlali ufumene amanqaku ali-12 (ukubala amanqaku eentyatyambo), kuya kufuneka athathe iithokheni ezili-12 kwibalahlo lakhe:
Wayenokuthatha iithayile ezi-3 (ubuso obu-1 phantsi = amanqaku ayi-10, ubuso obu-2 phezulu = inqaku eli-1 nganye
Qaphela: Nje ukuba umdlali athi iMahjong, abanye abadlali akufuneki babonise iithayile zabo okanye bamoshe iithayile ezilahliweyo de amanqaku onke abaliwe.
Nje ukuba umdlalo ngamnye ugqityiwe (nokuba ubani uyaphumelela okanye ukuba kukho into engenanto), imimoya enxulumene nomdlali ngamnye iyajikeleza (imimoya, hayi abadlali, ngaphandle kokuba umjikelo uyaphela).
Umdlali obenguMpuma uba nguMntla, umdlali obengu Mzantsi uba yiMpuma, iNtshona iba nguMzantsi noMntla ukuya eNtshona.
Ekupheleni komjikelo ngamnye
Ekupheleni komjikelo ngamnye, ukongeza ekujikelezeni imimoya, kukho utshintshiselwano kwizikhundla zabadlali. Iinjongo zolu tshintsho lwezihlalo kukuqinisekisa ukuba umdlali ngamnye uye ngasekhohlo nasekunene komnye nomnye umdlalo.
Ekupheleni kokujikeleza komoya waseMpuma kunye Phambi kokuqala komoya ojikeleze uMzantsi, umdlali oza kuphinda abe seMpuma kwakhona kwaye oza kuba nguMzantsi batshintshiwe izihlalo zabo. Abadlali baseNtshona kunye naseMantla nabo bayatshintsha izihlalo zabo.
Ekupheleni kokujikeleza komoya wasezantsi kunye ngaphambi kokuqala ujikelezo lomoya wasentshona, umdlali oya kuba seMpuma ngoku uya esihlalweni somdlali waseNtshona, lowo uya kuba nguMazantsi kuloo womdlali waseMantla, umdlali waseNtshona emazantsi naseMantla eMpuma.
Ekupheleni kokujikeleza komoya wasentshona kunye ngaphambi kokuqala umjikelo womoya oMntlaUmdlali oya kuthi ngoku abe seMpuma kwaye lowo ebeya kuba seMazantsi utshintshiswe ngezihlalo zabo. Ngokukwanjalo, abadlali beNtshona kunye noMntla baya kutshintsha izihlalo zabo.
Ingakhangeleka ingcolile (kwaye kunjalo), kodwa ngale ndlela bonke abadlali bayabatshintsha abachasi babo ukusuka ekhohlo nasekunene, oko ke kuthintela ukuzoba komoya ekuqaleni komdlalo ekuphawuleni abamelwane bethu kuwo wonke umdlalo.
Qaphela: Enye indlela yokwazi ukuba utshintsho lwezihlalo lwenziwe ngokuchanekileyo kukuba umdlali ofumene uMzantsi xa ephepha imimoya kufuneka abe ngumdlali waseMpuma ekuqaleni komjikelo osezantsi. Lowo ufumene iNtshona kufanele ukuba abe seMpuma xa eqala umjikelo waseNtshona, kwaye nabani na ofumene uMntla uya kuba xa eqala umjikelo waseNyakatho.
Bonisa iintyatyambo zokuqala
Umdlali ngamnye, kufuneka, abonise ukuba baneentyatyambo (ngokubiza "Intyatyambo" okanye "Intyatyambo") okanye bangabinayo nayiphi na intyatyambo ("Andinayo", "Andinazo iintyatyambo" okanye "Azikho iintyatyambo"). Emva kokuthatha iimpawu zentyatyambo ekupheleni kodonga, umdlali ngamnye kufuneka abize ukuba abasenazo iintyatyambo ("Azisekho iintyatyambo" okanye "Azisekho iintyatyambo").
Umdlali Este Unophawu lweentyatyambo kunye namaxesha onyaka, ke uya kuyibonisa ngokuyishiya ngasekunene kwakhe kwaye athathe enye ithokheni ukusuka esiphelweni sodonga (ufumana ama-5 ee-Disc). Nje ukuba athabathe ithokheni eyongezelelweyo, umdlali waseMpuma kufuneka athi ngokuvakalayo ukuba akasenazo iintyatyambo.
Xa yayilithuba lomdlali on kufuneka utsho ngokuvakalayo ukuba ayinazo iintyatyambo.
NjengaseMpuma, umdlali Oeste, ineempawu zentyatyambo kunye nezikhululo (ineethokheni zeentyatyambo ezi-2), kwaye xa uthatha iithayile ezingaphezulu eludongeni, kuya kuphuma iithayile ezimbini ezifanayo ezi-2 zaBalinganiswa. Emva kokuzoba iithayile ezibuyisela enye, iNtshona ingathi ayinaziintyatyambo.
Ke iya kuba lithuba lomdlali mantla. Ayinazo iintyatyambo, ke ndingatsho ngokuvakalayo ukuba ayinazo iintyatyambo.
Umdlali waseMpuma ngowokuqala ukulahla ithayile. Umdlali waseMpuma uqengqa ithokheni ye-bamboo 3, eyibeka phambi kwakhe:
Kuba ithokheni ye-3 bamboo ifunwa ngumdlali wase Mzantsi kwaye akukho mntu uyifunayo, uyayithatha enze i-Chi (2-3-4 ye-Bamboo), ayishiye ngasekunene ajonge kuyo kunye no-3 we-Bamboo ajikile (eshiya umqondiso ngasekhohlo obonisa ukuba yayingumdlali ngasekhohlo kwakhe, eMpuma, owayiphosileyo).
Kuba uMzantsi uthathe i-discard, ayinakweba eludongeni. Ngoku kufuneka alahle umqondiso, kwaye aqengqe i-9 yeeSangqa.
Nangona kunjalo, iithokheni ezili-9 zomdla wesangqa zinomdla kumdlali waseNyakatho ukwenza i-Kong. Ke ngoko, ithuba lomdlali waseNtshona liza kutsitywa, kwaye umdlali waseMantla uyakubonisa intshukumo yakhe (kufuneka abonise le Kong, kuba ayifihlwanga), eguqula enye ye-Bamboo 9 embindini wendibaniselwano (kuba uyilahlile. umdlali ochasene naye, uMazantsi) kwaye uya kuthatha ithokheni eyongezelelweyo ukusuka esiphelweni sodonga (ukusukela emva kokwenza iKong ithokheni eyongezelelweyo kufuneka izotywe ukusuka eludongeni). Ufumana abalinganiswa abasi-7.
Nangona ngoku iya kuba lithuba lomdlali wasemantla ukuphosa ithokheni, uthatha isigqibo sokutyhila i-Kong efihliweyo (ke ujika iithokheni ezi-4 zijongise ezantsi) kwaye uya kuthatha omnye umqondiso.
Emva kokuthatha ithokheni yakhe eludongeni (ufumana i-1 yeeSangqa), umdlali waseMantla kufuneka alahle umqondiso, emva koko, ukuba bekungekho mdla kuye nabani na, umdlali waseMpuma uya kudlala, ngubani oza kuthatha umqondiso eludongeni, njalo njalo. Umdlalo uphelile xa umdlali esenza iMahjong okanye zonke iithayile zisetyenzisiwe (akukho sandla).
Ukudlala kunye namanqaku abo
Kwi-RCM kukho imidlalo engama-81, exabisa ukusuka kwindawo enye ukuya kumanqaku angama-1. Ziyafuneka Amanqaku e-8 ukwazi ukwenza iMahjong.
Ukuba umdlali uvale nge-chip elahliweyo ngomnye, ufumana kuloo mdlali inqaku lesandla sakhe, ukongeza amanqaku ayi-8 ongezelelweyo kubo bonke abadlali (kubandakanya nalowo waphosa i-chip evumelekileyo ukuba ivale).
Ukuba uvala ngethayile etsalwe eludongeni, wongeza amanqaku ayi-8 kumanqaku akhe kwaye ufumana loo mali kuye ngamnye wabachasi abathathu.
lahla Ukusuka eludongeni
Lahla Amanqaku eWinner + 8 -
Phumla 8 -
bonke - Amanqaku eWinner + 8
Imigaqo ngokubanzi xa kudityaniswa imidlalo
Ukufumana amanqaku kwimidlalo ebandakanya abanye
Xa intshukumo ingenakwenziwa ngaphandle kokubandakanya enye, intshukumo esele ibandakanyiwe ayinakufumana manqaku.
Umgaqo wokukhutshelwa ngaphandle okanye ukuthintela ukusetyenziswa komdlalo ngokuphindaphindiweyo
Ukuba indibaniselwano ezimbini okanye ezintathu zisetyenziselwa ukwenza intshukumo, ubuninzi bolunye lolo manyano bunokusetyenziselwa ukusebenzisa nezinye indibaniselwano kunye nokwenza intshukumo entsha.
Banokongezwa: inqaku eli-1 le-Bamboo End Chis Chis, i-1 yenqaku le-Two Character End Chis kunye nenqaku eli-1 kuphela kwi-Mixed Double Chow (1-2-3 ye-Bamboo kunye ne-1-2-3 yaBalinganiswa). Ayizukuphinda isebenze kwakhona i-7-8-9 ye-Bamboo kunye ne-7-8-9 yaBalinganiswa kwelinye inqaku ngu-Mixed Double Chow, kuba sele sisebenzise enye indibaniselwano yeTis Chis Terminals Imidlalo eyiyo (1-2 -3, zombini iiBambo kunye nabalinganiswa).
Imidlalo edibanisa isandla esifihliweyo
Kwimidlalo efihliweyo ngokwendalo, amanqaku awongezwa kwisandla esifihliweyo, nangona zinokudityaniswa nesandla esifihlwe ngokupheleleyo.
Le midlalo yile: Iitayile eziMiselweyo kunye neeMbeko eziPhantsi, iiTiles eziThungiweyo ezineMbeko eNkulu, izibini ezibini, iiPung ezifihliweyo ezi-7, iiSango eziThoba, iziBini eziLandelanayo ezi-4 ezilandelelanayo kunye neenkedama ezili-7.
IiKong ezimbini eziBonakalisiweyo zixabisa amanqaku ama-4.
I-Kong ebonakalisiweyo edityaniswe ne-Kong efihliweyo ixabisa amanqaku ama-6.
I-Kong Hidden ezimbini ixabisa amanqaku ama-8.
1. Isazisi esiFanayo seChi
Amanqanaba amabini esuti enye kunye nokulandelelana kwenani elifanayo.
Iileli ezimbini zeesuti ezimbini ezahlukeneyo, kodwa inani elifanayo ngokulandelelana.
3. Ukunyathela okufutshane
I-Chis ezimbini zesuti efanayo, ngokulandelelana kwenombolo ngokulandelelana.
4. IiTheminali ezimbini eziSulungekileyo
Izinyuko ze-1-2-3 kunye ne-7-8-9 yesuti efanayo.
5. IPung yeeTheminali okanye iiMoya
Isandla esiqulathe iPung yeeTheminali (izixhobo zokubala 1 no-9) okanye iiWinds, ngaphandle komoya oyiWe Own okanye owaMoya oyiNtloko (Umoya ojikelezayo).
6. Kong Kuboniswa
I-Kong ifunyenwe kwithokheni elahliweyo okanye ekongezeni ithokheni kwi-Pung esele ibonisiwe. Qaphela: Ukulahla akunakutsalelwa ukwandisa iPung eveziweyo.
7. Usapho olungekhoyo
Isandla ekungekho iichips zoluhlobo lwe-1 kwezi-3 zeesuti. Oko kukuthi, isandla esineesuti ezi-2 kuphela. Inokuthwala ii-Honours.
8. Akukho ziHonours
Isandla esenziwe ngamathokheni esuti kuphela, ngaphandle kwethokheni ye-Honours. Oko kukuthi, akukho Winds okanye Dragons.
9. Umda wokulinda
Ukulinda u-3 okanye u-7 ukwenza i-Chi ngo-1-2 okanye ngo-8-9. Esi sandla asisebenzi xa sidityaniswe nalo naluphi na uhlobo lokulinda (umzekelo, ukulinda ukuvalwa ngeetshipsi ezisi-7-7-8-9 kuthathwa njengokudibanisa iEdge Wait kunye noLindelo olulula, kuba kunokuthathelwa ingqalelo ukuba i-7 kufuneka yenze u-7-8-9 okanye isibini esi-7-7).
Qaphela: Bamba amanqaku anikezelwa kuphela xa kufuneka ithokheni enye.
Umzekelo, ulinde ukuvala nge-Bamboo 7 kuphela ene:
10. Linda Kuvaliwe
Vala ngokuLinda okuValiweyo (umzekelo, ukuba no-2-4 kunye nokulinda ama-3). Esi sandla asisebenzi xa sidityaniswe nolunye uhlobo lokulinda (umzekelo, ukulinda ukuvalwa ngeetshipsi ezi-2-2-2-4 kuthathwa njengokudityaniswa kokulinda okuvaliweyo kunye nokulinda ngokulula, kuba zisebenza zombini kunye 3). Nangona kunjalo, ukudibanisa ukulinda ku (umzekelo, 4-6-7-7-8 kunye nokulinda i-9 kuthathwa njengokudityaniswa kwe-Edge Linda kunye nokuVala okulindelweyo, kodwa yithokheni eli-8 kuphela elisebenza ukuvala).
Umzekelo, ukuba inokuvalwa kuphela nge-5 yeeSangqa nge:
11. Ukulinda ngokulula
Vala ngekhadi elenza isibini. Le ntshukumo ayisebenzi xa idityaniswe nolunye uhlobo lokulinda (umzekelo, ukulinda ukuvalwa ngeetshipsi ezi-2-2-2-4 kuthathwa njengokudityaniswa kokulinda okuvaliweyo kunye nokulinda ngokulula, kuba zisebenza zombini kunye 3). Ayamkelekanga ukuba iindlela ezimbini kulindeleke ukuba zivale kunye nesibini (umzekelo, 4-6-7-8 kwaye ulindele u-9 okanye u-6).
Vala ngethokheni ebanjwe eludongeni.
13. Iintyatyambo zeentyatyambo namaXesha oNyaka
Intyatyambo nganye ixabisa inqaku elinye. Babalwa ekupheleni kwesibalo samanqaku onke. Abalisebenzisi amanqaku asezantsi amanqaku ayi-1. Banokuboniswa nanini na ufuna. Zishiyeke kwicala lasekunene (njengazo zonke iintshukumo kunye neethayile eziveziweyo) kwaye ithayile entsha ithathwa esiphelweni sodonga. Ukuba umdlali uvale ngophawu olutsha, inqaku liyongezwa ngokuvala udonga.
IPung (okanye iKong) yeeDragons. Inokufihlwa okanye ivezwe.
15. Umoya Obalaseleyo Womoya
IPung (okanye iKong) yomoya obalaseleyo, ohambelana nomoya wokujikeleza. Ingafihlwa okanye iboniswe.
16. Yeyakhe Umoya Pung
IPung (okanye iKong) yomoya wayo Ingafihlwa okanye iboniswe.
17. Isandla Esifihliweyo
Yonke indibaniselwano ifihliwe kwaye ivale ngethayile elahliweyo.
18. Zonke iiChi
Isandla esineChis kuphela kwaye asinayo iMbeko.
Sebenzisa iithayile ezi-4 zethayile enikiweyo, ngaphandle kokuyibhengeza i-Kong (Oko kukuthi, ukuyisebenzisa ukwenza ezinye izinto). I-Kong efihliweyo okanye eveziweyo ayibali njengesiKhokelo seHoard.
20. I-Double Pung edibeneyo
Isandla siqulathe ii-Pung ezimbini okanye i-Kong zenani elifanayo (kodwa iisuti ezicacileyo ezahlukileyo).
21. IPung eZimbini eziFihliweyo
Isandla siqulathe iiPungs ezimbini ezingakhange zivezwe (Oko kukuthi, azenziwanga ngeethayile ezilahliweyo). I-Kong efihliweyo ayifanele iPung efihliweyo.
22. IHong Kong efihliweyo
Isandla esiqukethe iithayile ezi-4 ezifanayo, akukho nanye kulahliweyo, kwaye ibhengezwe njengeKong. Zonke iithayile zijikwe zajongiswa ezantsi.
23. Zonke zilula
Isandla ngaphandle kwethokheni yesiphelo okanye uphawu imbeko. Zonke iichips ezisezandleni zilula (iichips 2-8).
24. Isandla esiHlaziyiweyo seTheminali kunye neeMbeko (Konke kuneeMbeko kunye / okanye iiTheminali)
Isandla esibandakanya ubuncinci itayile enye yesiphelo okanye enye imbeko kwindibaniselwano nganye, kubandakanya isibini.
25. Isandla Esifihliweyo Ngokupheleleyo
Isandla esigqityiweyo ngazo zonke iithayile ezitsalwe eludongeni, kubandakanya nesibini.
26. I-Kong ezimbini zibonakalisiwe
Isandla sineeKong ezimbini ezibonisiweyo.
27. Ithebhu yokugqibela
Vala ngethayile elahliweyo eyokugqibela kolo hlobo lukhohlo (umzekelo, ukuba sele bekho
ilahliwe okanye isetyenziswe ngabanye abadlali kwindibaniselwano etyhilekileyo iziqwenga ezintathu ze-Bamboo, vala ngesiqwenga sokugqibela se-4 se-Bamboo). Ayinakudityaniswa neKong Robo.
Isandla esenziwe yi-4 Pung (okanye i-Kong) kunye nesibini.
29. Isandla seSipipura (Isandla esinyulu kunye neMbeko)
Isandla esineetshipsi ukusuka kwisuti enye kuphela kwezintathu, ngokudibeneyo neetshipsi zeHonours.
30. Amaqhula amathathu aMxakanisiweyo
Isandla esiqulathe ezintathu zeChis zesuti ezintathu, kwaye ukuqala kwazo iichips zikwixesha elinyukayo lenyathelo elinye.
31. Zonke iintsapho neeMbeko
Isandla esenziwe ngokudityaniswa apho kuvela iithokheni zeentlobo ezintlanu ezikumdlalo. Ezi zintathu iisuti: Abalinganiswa, iiDiski, iiBambo, kunye neMimoya neeDragons.
32. Isandla esivelisiweyo
Isandla apho indibaniselwano nganye igqityiwe ngeetshipsi ezilahliweyo ngabanye abadlali, kubandakanya nesibini. Inokudityaniswa kunye neendawo zokulinda.
33. IiDragons ezimbini
Isandla siqulathe ii-Pung (okanye i-Kong) ezimbini zeDragons.
34. I-Kong ezimbini ezifihliweyo
Isandla esibandakanya iiKong ezimbini ezingakhange zivezwe.
35. Ileli exutyiweyo
Ukuchaneka (iithayile ukusuka kwi-1 ukuya kwi-9) ezenziwe nguChis wezi zixhobo zintathu. Inokudityaniswa neTodo Chi.
Isandla esenziwe ngokudityaniswa okwenziwe ngeethayile ezime ngokuthe nkqo (oko kukuthi, ngezo tile zijongeka ngokujonga ubuso zijongise ezantsi: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 eeDiski, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 weBambúes kunye neNyoka emhlophe). Inqaku leNtsapho engekhoyo lifakiwe.
37. I-Triple Chi ixutywe
Isandla esineeChis ezintathu ezilinganayo, kodwa iisuti ezahlukileyo.
38. I-Pung edibeneyo yokuDibanisa
Isandla siqulathe iPung ezintathu okanye iKong, nganye yesuti eyahlukileyo kunye nenani elikhulu kunePung yangaphambili.
39. Isandla esingenanto
Isandla esingenamanqaku. Amanqaku eentyatyambo awaxhomekeki kula manqaku. Iintyatyambo zongezwa emva kwamanqaku asi-8 okuphumelela.
Ukuvala, umzekelo, ngokulahla isi-3 se-Bamboo (hayi isiqwenga sokugqibela sesi-3), kwaye kungabi sisandla esifihliweyo okanye esivelileyo. Yiyo loo nto kuzalisekisiwe ukuba ayisiyo yonke i-Chi, okanye i-All Pung, akukho manqaku okulinda, okanye iPung yeeTheminali okanye iiHonours, okanye uMqondiso wokuGqibela, njl.
40. Ithebhu yokugqibela yoDonga
Vala ngetayile yokugqibela eludongeni. Ayinakudityaniswa noVala udonga.
41. Lahla uMqondiso wokuGqibela wodonga
Vala ngokulahla itayile yokugqibela eludongeni.
42. Vala ngeText Kong Token
Vala ngethokheni eyongezelelweyo ethathwe emva kokufumana i-Kong.
43. Ukuphangwa kweKong
Vala ngethokheni ebiweyo kumdlali athe wadlula kuyo ukusuka kwi-Pung evezelwe kwi-Kong. Ayinakudityaniswa neSandla esiFihliweyo ngokupheleleyo.
44. Iimpawu ezithunyiweyo zimbalwa iimbeko
Isandla esenziwe ngezi tile zilandelayo: 5 okanye 6 i-Honours (ayibhangqwanga) kunye neseti esezantsi ye-8 okanye ye-9 yeethayile. Ngama-7 amathokheni e-Honours, umdlalo ubizwa ngokuba yiTew Tokens nge-Great Honours. Isandla kufuneka sifihlwe, nangona kungafuneki sifihlwe ngokupheleleyo, oko kukuthi, ithayile elahliweyo inokutsalwa ukuze ivalwe. Ayinakudityaniswa nayo yonke iMindeni okanye iSandla esifihliweyo.
45. Iimpawu ezityiweyo
Umdlalo okhethekileyo oquka iichips 1-4-7 zesuti enye, 2-5-8 yesinye isuti kunye no-3-6-9 wesuti yesithathu. Isandla akufuneki sifihlwe (ngokucacileyo, ungazoba ilahleko ngaphandle kokuba ukuvala indibaniselwano yesine, hayi iitayile ezithungiweyo). Inokudityaniswa neTodo Chi.
46. ​​Owongamileyo 4
Isandla esineetshipsi 6 ukuya kwi-9 kuphela.
47. Ezantsi 4
Isandla esineetshipsi 1 ukuya kwi-4 kuphela.
48. Iimoya ezintathu ezikhulu
Isandla siquka i-3 Wind Pung okanye i-Kong.
49. Izinyuko ezinyulu
Isandla esenziwe nge-1-9 ethe tye kwichips yesuti efanayo, esenza isi-3 ngokulandelanayo uChis.
50. U-Chis ogqithileyo kwiintsapho ezi-3
Isandla esineeChows 1-2-3 kunye 7-8-9 zesuti enye, i-Chows 1-2-3 kunye ne-7-8-9 yenye isuti kunye nesibini se-5 yesuti yesithathu eseleyo. Amanqaku eMixed Double Chi, iTerminal Chis ezimbini, akukho ziHonours kunye nayo yonke iChi sele ifakiwe.
51. Abathathu abaSulungekileyo abanyathekileyo uChis
Isandla esenziwe ngeChis ezintathu zesuti enye, nganye inesiqalo sokuqala esiqala ngenani okanye amabini amakhulu kunesiqwengana seChi yangaphambili, kodwa hayi umxube wazo zombini (oko kukuthi, okanye iiChis ezintathu zineziqalo zokuqala Isithuba esinye okanye zontathu iChis zikwikhefu lesibini).
Isandla apho yonke indibaniselwano ibandakanya isi-5 (kubandakanya isibini).
53. I-Triple Pung exutywe
Isandla esineePung ezintathu ezilinganayo (okanye i-Kong), kodwa nganye yesuti eyahlukileyo.
54. I-Pung efihliweyo emithathu
Isandla esibandakanya iiPungs ezintathu ezingachazwanga (i-Kong efihliweyo ayibalwanga).
55. Izibini ezisixhenxe
Isandla senziwe ngeesibini zeetshiphusi. Ihlala iphela ngokulinda ngokulula. Ithayile elahliweyo inokutsalwa ukugqiba umdlalo. Ayinakudityaniswa kunye neZinto zoBini (iPung of), Isandla esifihliweyo, okanye iZandla eziLula zokubamba Inokudityaniswa nazo zonke iiNtsapho, Isandla esifihliweyo ngokupheleleyo, iTokheni eFihliweyo, akukho Mbeko, konke okuLula, i-1 Usapho olulahlekileyo, Zonke iiTheminali, okanye Zonke iiMbasa.
56. Iimpawu eziMiswe ngokuHlonipha okukhulu
Isandla esenziwe sisinye sezihlonipho ezisixhenxe (ngaphandle kokuphindaphinda) kunye neethayile ezivela kwezi suti zintathu zenza ulandelelwano lweetayile ezisixhenxe ezotyiweyo (Oko kukuthi, zineethayile ezisixhenxe zasithoba ezenza isandla seetayile ezotyiweyo: iithayile 1- I-4-7 yesuti enye, 2-5-8 yesinye isuti kunye ne-3-6-9 yesuti yesithathu). Isandla masifihlwe. Ayinakudityaniswa nezandla: Zonke iiNtsapho, isandla esifihliweyo, okanye ukulinda ngokulula.
57. Bonke Oontanga (Bonke Oontanga Be-Pung)
Isandla esenziwe ngu-Pung weetiles (kubandakanya ezi zibini). Amanqaku kuyo yonke iPung, akukho Mbeko kwaye konke okulula sele kufakiwe. Inokudityaniswa neNtsapho engekhoyo okanye iSandla esimsulwa.
58. Isandla esicocekileyo
Isandla esineetshipsi ezifanayo kwaye ngaphandle kweHonours. Amanqaku avela kwisandla se-Honours afakiwe.
59. U-Triple Chi ngokufanayo
Abathathu abalinganayo uChis kunye nesuti efanayo. Ayinakudityaniswa nesandla esifanelekileyo sePung.
60. I-Pung emithathu elandelelanayo ecocekileyo
Isandla nge-Pung (okanye i-Kong) yesuti enye, nganye inenani elingaphezulu kweyunithi enye kunelokugqibela. Ayinakudityaniswa ne-Triple Chi efanayo.
61. Iithebhu eziphezulu
Isandla esenziwe ngokudityaniswa kweethayile 7, 8 kunye ne-9 (kubandakanya isibini). Amanqaku okungahlonitshwa afakiwe. Inokudityaniswa nayo yonke iPung, usapho olungekhoyo okanye iSandla esimsulwa.
62. Iithebhu eziMbindi
Isandla esenziwe ngokudityaniswa kweethayile 4, 5 kunye ne-6 (kubandakanya isibini). Amanqaku okungahlonitshwa afakiwe. Inokudityaniswa nayo yonke iPung, usapho olungekhoyo okanye iSandla esimsulwa.
63. Iithebhu ezisezantsi
Isandla esenziwe ngokudityaniswa kweethayile 1, 2 kunye ne-3 (kubandakanya isibini). Amanqaku okungahlonitshwa afakiwe. Inokudityaniswa nayo yonke iPung, usapho olungekhoyo okanye iSandla esimsulwa.
64. Amane anyulu anyathelwe uChis
Isandla sesine seChis yesuti efanayo, nganye nganye iziqwenga zokuqala zagungqa inani elinye okanye amabini ngokubhekisele kwisiqalo seChi yangaphambili.
65. Iitoni ezintathu
Isandla esibandakanya ezintathu zeKong. Zingafihlwa okanye ziboniswe.
66. Zonke iiMbasa neeTheminali
Isandla esineeTheminali ngokupheleleyo (zokubala 1 kunye ne-9) kunye neHonours (Winds and Dragons). Akukho manqaku ongezelelweyo avunyelwe kwimidlalo esisiseko yee Wind kunye neeTheminali. Amanqaku Kuzo Zonke I-Pung, i-Terminal Pung kunye ne-Honors Pung afakiwe. Ingadityaniswa nesiqingatha seSandla esicocekileyo, uSapho olungekhoyo, iiDragons ezimbini, iiDragons ezintathu ezincinci, iiDragons ezintathu eziMkhulu, imimoya emithathu, imimoya emine emincinci, okanye imimoya emine emikhulu.
67. Amashumi amane ka-Chi ngokufanayo
Isandla esenziwe ngu-Chis olinganayo kwisuti efanayo. Amanqaku ePung emileyo ePung, i-Hoard Token kunye ne-Double Double Chi zibandakanyiwe.
68. IiPung ezine ezilandelelanayo ezilandelelanayo
Isandla esibandakanya i-Pung ezine okanye i-Kong yesuti efanayo, egxadaziswe yenye.
70. Imimoya emine emincinci
Isandla esibandakanya i-Pung (okanye i-Kong) ye Winds ezintathu kunye nesibini somoya oshiyekileyo. Inokudityaniswa noMoya oBalaseleyo kunye noMoya oWayo. Amanqaku amathathu oMoya oMkhulu afakiwe.
71. Iidragons ezintathu ezincinci
Isandla esibandakanya ii-Pung (okanye i-Kong) ezimbini ze-Dragons, kunye nesibini se-Dragon. Amanqaku ngePung nganye yeDragons nganye awabalwa.
72. Yonke iMawonga
Isandla senziwe ngokupheleleyo ngee-Honours (Winds kunye / okanye ne-Dragons). Inokwenziwa ngePung okanye iKong, ifihliwe okanye iboniswe. Inokudityaniswa neDrag Pung. Amanqaku eTodo Pung afakiwe.
73. I-Pung efihlakeleyo
Isandla esibandakanya iPung (okanye iKong) engachazwanga. Ayinakudityaniswa nesandla esifihliweyo ngokugqibeleleyo okanye yonke iPung.
Isandla senziwe nge-Lower Chis (1-2-3), ezimbini eziphezulu ze-Chis (7-8-9) kunye nezibini ezi-5, zonke zinesuti efanayo. Amanqaku esandla esicocekileyo, izibini ezisixhenxe, ii-Chows eziyekiswayo kunye ne-Double Chow efanelekileyo ifakiwe.
75. Iimoya ezinkulu ezine
Isandla esenziwe nguPung (okanye iKong) semimoya emine. Ayinakudityaniswa nayo yonke iPung okanye i-Wind eyongamileyo okanye iPung Wind Wind.
76. Iidragons ezinkulu ezintathu
Isandla esenziwe nguPung (okanye i-Kong) se-3 Dragons. Ayinakudityaniswa neDrag Pung.
77. Yonke iluhlaza
Isandla senziwe nge-2, 3, 4, 6, 8 iithayile ze-Bamboo kwaye, ngokuzikhethela, zii-Green Dragons. Inokudityaniswa neSandla esimsulwa, iSandla esiSulungekileyo (ukuba kusetyenziswa iiDragons eziGreen), izibini ezi-7, Isandla esifihliweyo, yonke iPung okanye yonke into elula.
78. Amasango alithoba
Isandla esenziwe ziichips 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9-XNUMX yesuti efanayo, isenza isibini ngayo nayiphi na kuzo. Isandla masifihlwe. Ayinakudityaniswa neSandla Esifihliweyo, Isandla esinyulu, okanye iiTheminali kunye neHonors Pung. Inokudityaniswa nesandla esifihliweyo ngokugqibeleleyo.
79. Iine Kong
Nasiphi na isandla esine-4 Kong. Banokufihlwa okanye bavezwe.
80. Iiperi eziSixhenxe eziSulungekileyo ezilandelelanayo
Isandla esenziwe ngababini iitshipsi zeesuti enye enani labo eligungxulwa lilinye. Ayinakudityaniswa nesandla esinyulu, isandla esifihliweyo ngokupheleleyo okanye ukulinda ngokulula.
81. Iinkedama ezilishumi elinesithathu
Isandla senziwe ngeethayile 1 kunye ne-9 ye-Bamboos, 1 kunye ne-9 yeeDiski, 1 kunye ne-9 yaBalinganiswa, kunye nesiXhenxe esinye seembeko. Isibini senziwe ngayo nayiphi na iichips. Ithayile elahliweyo inokutsalwa ukugqiba umdlalo. Ayinakudityaniswa nesandla esinyulu, isandla esifihliweyo ngokupheleleyo okanye ukulinda ngokulula.
Ukuba umdlali wenza impazamo xa ebhengeza i-Chi, iPung, i-Kong okanye ethatha ithokheni yokutshintsha, uphulukana nelungelo lokuphumelela umdlalo (Isandla esifileyo), nangona ungaqhubeka nokudlala, ubiba ukulahla, njl.
Abadlali abanakho ukucela ukulahlwa kwaye batshintshe ingqondo. Ixesha lokuqala uya kwaziswa, okwesibini iya kuba wohlwaywa nge Amanqaku e-5 (ukuba ihlawulwe kumdlali ngamnye), okwesithathu Amanqaku e-10, owesine Amanqaku e-20, kwaye nangokunjalo.
Ukuchukumisa iithayile zodonga ngaphambi kokuba umdlali wangaphambili alahle kuthathwa njengokungcola. Ixesha lokuqala uya kwaziswa, okwesibini iya kuba wohlwaywa nge Amanqaku e-5 (ukuba ihlawulwe kumdlali ngamnye), okwesithathu Amanqaku e-10, owesine Amanqaku e-20, kwaye nangokunjalo.
Ukuba umqondiso awubonwanga, uya kushiyeka apho wawukho. Ukuba umqondiso ubonisiwe, umdlali akazokwazi ukuphumelela umdlalo (Isandla esifileyo), nangona ungaqhubeka nokudlala, ubiba ukulahla, njl.
Cela uPung ngokulibaziseka
Cela ithokheni yePung engaphezulu kwe- Imizuzwana ye3 Ukufika emva kwexesha kuthathwa njengempazamo. Ixesha lokuqala uya kwaziswa, okwesibini iya kuba wohlwaywa nge Amanqaku e-5 (ukuba ihlawulwe kumdlali ngamnye), okwesithathu Amanqaku e-10, owesine Amanqaku e-20, kwaye nangokunjalo.
I-Mahjong yamanga (Ubuxoki Hu)
Ukuba umdlali unayo ngaphantsi kwamanqaku asi-8 kufuneka uhlawule Amanqaku e-10 kumdlali ngamnye kwaye uya kuba nayo Isandla esifileyo, nangona eqhubeka nokudlala, eba ukulahla, njl.
Ukuba umdlali ayihlangabezani neemfuno ukwenza iMahjong ilahle (uneetayile ezingaphezulu kwe-14 okanye ngaphantsi kwe-14, wenze impazamo ngethayile yokuvala, njl. Amanqaku e-20 kumdlali ngamnye kwaye uya kuba nayo Isandla esifileyo, nangona eqhubeka nokudlala, eba ukulahla, njl.
Kwakhona, zonke iichips ezibonisiweyo Isibhengezo sobuxoki Mahjong kufuneka ilahlwe kulo mdlali ulandelayo uyajika.
Konke itab ibonisiwe ngumdlali (uyawa xa eyiba eludongeni, ayiphose phakathi kweetshipsi ezandleni zakhe, njl. kufuneka ilahlwe kumjikelo olandelayo womdlali.
Kwimeko apho umdlali bonisa zonke iichips zakho xa omnye umdlali ebhengeza iMahjong wenza isenzo esibi. Ukuba ekugqibeleni lo mdlali ubhengeze iMahjong phumelela, umdlali obonise iichips zakhe uya kuba icetyisiwe.¿ Akaphumeleli omnye umdlali? Kufuneka ujule iichips ezibonisiweyo nganye nganye.
Ukuba umdlali ityhila enye ifayile, kufuneka ahlawule umdlali owenzakeleyo phakathi Amanqaku ama-5-60 kugqitywe ngusompempe (naye oza kuthatha isigqibo sokuba uyaqhubeka na umdlalo okanye hayi).
Inani elingasebenziyo leTokeni
Ukuba umdlali uneetshipsi ezingaphantsi kwe-13 okanye ngaphezulu kwe-13 phakathi kokujika, unayo Isandla esifileyo, nangona eqhubeka nokudlala, eba ukulahla, njl.